श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्मा दिइन् कल्बमा पार्टी, को पुगे उनको पार्टीमा ? (भिडियोसहित) – Online Nepalaja
Prevअभिनेत्री सुष्मा कार्कीको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् ?
Nextप्रेमदिबसकै दिन कन्चन पुगे कोमामा ! दियो निभ्नै लाग्यो,अनिशालाइ यस्तो सन्देश पठाइन निरुले! (हेर्नुहोस भिडियो)